Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana ny raharaha Robert Todd Lincoln | Steven Spielberg miaraka amin'ny raharaha Reincarnation an'ny Edwin Booth | Amitabh Bachchan - Fikarohana Reincarnation
Hita taratra amin'ny: Torohevitra momba ny fanahy na fanahy amin'ny maha-Ahtun Re ao amin'ny sehatra fikarohana momba ny Reincarnation Ryerson-Semkiw, 2003, 2005
Taorian'ny nanaovako ny fanombanana fa Ahtun Re, torolàlana fanahy izay alefan'i Kevin Ryerson, afaka manao lalao marina momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray dia nanomboka nanontany momba ny fiainako taloha aho. Rehefa nanontany an'i Ahtun Re aho nandritra ny androm-piainany taloha Steven Spielberg, Gaga aho rehefa nilaza tamiko izy fa i Spielberg no lahitokan'i Abraham Lincoln lasa olon-dehibe, Robert Todd Lincoln. Tsy ho nataoko mihitsy izany fifandraisany izany, na dia i Lincoln aza dia mpankafy teatra lehibe, izay toa nitatra tamin'ny zanany lahy.
Roa taona teo ho eo taty aoriana, niasa tamin'ny tranga reincarnation aho ho an'ny dikan-teny Indiana ateraka indray, ao anatin'izany ny an'i Amitabh Bachchan, iray amin'ireo kintan'ny sarimihetsika malaza indrindra any India. Nilaza tamiko i Ahtun Re fa i Bachchan taloha dia i Edwin Booth, iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika malaza indrindra tamin'ny taonjato faha-19 tany Amerika ary ny rahalahin'i John Wilkes Booth, ilay lehilahy namono an'i Abraham Lincoln.
Ny fanadihadiana fanampiny dia nahalalana fa ny fianakavian'i Edwin Booth dia teraka tao amin'ny vatana vaovao manodidina an'i Amitabh Bachchan any India, raha ny fianakavian'i Lincoln, ao anatin'izany i Abrahan sy Robert Todd Lincoln | Steven Spielberg, dia teraka indray ao amin'ny Hollywood maoderina.
Ny mombamomba manokana an'ireo vondrona roa mifandray ireo, ny vondrona fanahy Lincoln ary ny vondrona fanahy Booth, dia manome ohatra mahaliana momba ny fomba hanavaozana ny fifandraisana amin'ny alalan'ny reinkarnation. Miseho ireo tranga ireo ateraka indray.
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Misy ny endri-tsehatra endrika an'i Robert Todd Lincoln sy Steven Spielberg, ao koa ny volombava mifanentana. Ny fahasamihafana iray dia mavesatra noho i Steven Robert i Robert. Misy fitoviana tsy misy dikany eo anelanelan'i Edwin Booth sy Amitabh Bachchan.
Fanavaozana ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fanambadiana: Ny fianakavian'i Lincoln dia namorona indray tany Hollywood ary nohavaozina ny fifandraisan'i Robert Todd Lincoln sy Abrahama rainy. Ny raharaha Abraham Lincoln dia asongadina ao ateraka indray. Ny fianakavian'i Edwin Booth dia niverina tao amin'ny Bollywood, foiben'ny sarimihetsika ao India.